Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkii huteel Naasahablood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkii huteel Naasahablood
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa tacsi u diray dadkii shacabka ahaa oo shalay galab oo Sabti ahayd ku geeriyooday weerar ay maleeshiyada al-Shabaab ku qaadeen huteelka Naasahablood ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in Ciidammada Qalabka Sida ay sii wadi doonaan ugaarsiga iyo hawlgalada ka dhanka ah argagixisada.
Madaxweynaha ayaa ammaan u jeediyay ciidanka dowladda sida deg-degga ah ee ay uga jawaabeen weerarka argagixiso ee galabta dhacay.
Waxaa uu ugu dambeyn Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud Ilaahay uga baryey dadkii ku dhintay weerarkan inuu Ilaahay naxariistii Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, intii ku dhaawacantey uu caafimaad buuxa siiyo, qoysaska iyo eheladii dadkooda ay ku waxyeeloobeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in lagala dirayo ilaalada madaxtooyada kadib markii la xiray ku dhawaad 300 xubnood oo ciidanka ilaalada madaxtooyada kamid ah kadib afgembiga fashilmay. “Ma sii ahaan doonaan [...]